Nosy Malagasy. Fanambarana amin'izao Fitsingerenan’ny taona nandaniana ny fehin-kevitra 34/91 - Tout pour la restitution des îles malagasy
Nosy Malagasy. Fanambarana amin'izao Fitsingerenan’ny taona nandaniana ny fehin-kevitra 34/91
Publié le 11 Décembre 2015 par Jeannot Ramambazafy
Fanambarana amin'izao Fitsingerenan’ny taona nandaniana ny fehin-kevitra 34/91
Feno 36 taona katroka androany faha 12 desambra 2015 ny nandanianan’ny fivoriamben'ny Firenena mikambana ny fehin-kevitra 34/91 tamin’ny 12 desambra 1979 mikasika ireo nosy kely Malagasy: Juan de Nova, Bassas Da India, Europa, Glorieuses...
Raha ny mikasika ireo nosy kely ireo dia mahafinaritra sy mahavelombolo fa tsy manadino velively ny soa natao taminy ny vahoaka Malagasy. Tsy misy tokoa avo nohon’ny fiandrianam-pirenena, izay fototra tokana amin’ny tetik’ady rehetra amin’ny ady amin'ny fahatrana sy ny fampandrosoana ny teo-karena amin’ny ankapobeany. Ny fiandrianana eo amin’ny harem-pirenentsika dia zava-dehibe loatra mba hahafahan’ny vahoaka Malagasy tsy vaky volo
migoka malalaka izany na eto amin’ny tany be na eo amin’ny manodidina toy ny amin’ireo nosy kely izay mahavariana fa misy arena voanjanahary hafa kely izay nafoin’Andriamanitra ho an’ny Malagasy. Tamin'ny fotoana androny dia nisandratra avo dia avo ny voninahitr’i Madagasikara maneran’izao tontolo izao.
Fandresena lehibe hoan’ny diplomatia Malagasy hatram’izay ka hatram’izao izany ary naneken'izao tontolo izao fa tokony hiverina tsy misy atakandro amin-tsika ireo nosy kely ireo amin'ny alalan'ny fampiraharahana amin’ny la Frantsa.
Tsy azo avela andeha fotsiny amin'izao intsony ity andro mana-tantaran'ny fitsingerenan’ny taona nadaniana an’io fehin-kevitra lehibe io. Ny vahoaka Malagasy tsy vaky volo no maneho ny hetahetany ho amin’ny famerenana haingana ireo nosy ireo, indridra fa amin’izao fihazakazahan’i la Frantsa sy ireo firenen-dehibe hafa izao amin’ny fitrandrahana ny harena tsy toko tsy foroana misy ao, nefa tsy anany zo ary antsika tanteraka. Manameloka ny fanambaran’ny masoivohon’ny Frantsay monina eto Madagasikara ny Malagasy tamin’ny filazany tsy ampihambahambana, fa fiandrianam-pirenen’ny la Frantsa ireo nosi-ntsika ireo.
Maro ny hetsim-bahoaka izay efa vohaomana ho amin’izany fankalazana du 12 desambra izany manerana ny nosy. Ny mampalahelo anefa dia norarana izany ary misy mihitsy aza ny fampitandremana. Nolazaina ihany koa fa nohon’ny fety sy ny asaramanitra dia mila fintoniana sy filaminana ny malagasy. Raha ny marina dia ny demokrasia mihitsy no hitsakitsahina. Mba aiza ilay fahafahana notakiana tamin’ny 1991 ary natao fitaovana nanonganana ny fitondrana izay
angady nananana sy vy nahitana io fehin-kevitra lehibe io. Andro fety sy fahavaratra nefa dia natao hodina tsy hita ny soratra mazava ao amin'ny lalam-panorenana sy ny mety ho voka-dratsin'ny fampelezan-kevitra eo amin'ny fiarahamonina.
Fotoan-dehibe tsy manam-paharoa ny 12 desambra mba ahafaha-ntsika indray manitsy ny fifandraisana iraisampirenanan’ny Madagasikara. Tokony hipetraka ho andrin'ny firaisan-kina sy ny fihavanam-pirenena.
Raha demokrasia tokoa no himasoa-ntsika dia tokony hifototra amin’ny fanajana ny zo n’olom-belona, isan’izany ny zo n’ny mponina hanan-tsafidy malalaka eo amin’ny taniny momban’ny rafitra politika sy ekonomika mifandraika amin’ny lalan-tsainy.
Terena hatrany isika handala izany demokrasia izany, nefa ireo firenena matanjaka ireo ihany no manosihosy izany rehefa ny tombotsoany manokany no voahozongozona.
Ny fifohazan’ny ambompon’ny Malagasy tsy vaky volo, amin’izao vanin’andro mampiaka-peo indray antsika izao mahakasika an’ireo nosy kely ireo izay antsoin'ny frantsay hoe “Iles éparses”, dia manaporofo hatrany fa masina ny Tanindrazana ary tsy maty ampon’ny Malagasy ny fihavanana. Koa, manainga antsika hanandratra avo dia avo ny fitiava-tanindrazana. Toerintsika hatrany ny fanosohoseana ny fiandrianam-pirenena Malagasy izay tsy azo amidy, tsy azo atakalo.
Maro ny soso-kevitra efa naroso toy ny fananganana rafitra ivondronan'ny olon-kendrin'ny firenena mba hisian’ny fanapahan-kevitra matotra mikasika ny raharaham-pirenena. Raha toa tafatsangana izany dia efa nisy ny fangaraharahana momba ny fifampidinihana mikasika ireo nosy ireo na amintsika samy Malagasy izany na eo amin'ny Malagasy sy ny Frantsay.
Tokony hitsagana tsy misy atakandro ny voamiera iombonan'ny Malagasy sy ny frantsay ho amin'ny famerenana ireo nosy ireo. Io voamera io dia tokony ahitana ny mpisehatra rehetra toy ny fiarahamonim-pirenena sy ireo izay manana traikefa manokana momba izany ary tsy hadinoina ireo angady nanana sy vy nahitana.
HO ELA VELONA I MADAGASIKARA SY IREO NOSINY!
Malagasy mitaky ny iles éparses
Profesora Raniriharinosy Harimanana